पोखरामा नेपालले दियो मलेसियालाई २९१ रनको लक्ष्य ! जित कस्को ? - News20 Media
January 21, 2020 January 21, 2020 N20LeaveaComment on पोखरामा नेपालले दियो मलेसियालाई २९१ रनको लक्ष्य ! जित कस्को ?
काठमाडौंः पोखरा रंगशालामा जारी दोस्रो एकदिवसीय मैत्रिपूर्ण क्रिकेट खेलमा नेपाल–११ ले मलेसिया–११ लाई २ सय ९१ रनको लक्ष्य दिएको छ । टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २ सय ९० रन बनायो ।
राष्ट्रिय टोलीबीचको प्रतिस्पर्धा भए पनि अनौपचारिक खेल भएकाले नेपाल–११ र भ्रमणकारी टोली मलेसीया–११ को नाममा सिरिज खेलिरहेका हुन् । ३ म्याचको सिरिजमा नेपाल १–० ले अघि रहेको छ । सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल १ सय ३५ रनले विजयी भएको थियो ।
दोस्रो खेलमा पनि नेपाल जितको श्रृखला जारी राख्दै एक खेल अगावै सिरिज जित्न चाहन्छ । मलेसियालाई भने सिरिजमा रहिरहन आजको खेल जित्नैपर्ने दबाबमा छ ।